Safal Khabar - डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि सचेतना अभियान
शनिबार, २८ भदौ २०७६, १३ : ०१
भरतपुर । प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘सबै जागौँ, सबै लागौँ, वरिपरि जमेको पानी हटाई डेंगु भगाऔँ’ अभियान सुरु गरेको छ ।
भरतपुर महानगरमा दिनहुँजसो डेंगु रोग सचेतनाबारे ¥याली निस्केका छन् । भरतपुर–७ वडा कार्यालयले शनिबार विहान सचेतना ¥याली निकालेको छ । उज्जवल टोल, सिजर्ना चोक टोल, माछापुच्छु्रे टोल, शिव टोल, दीपज्योति टोल लगायका वडाभित्रका २९ वटै टोल विकास समितिहरुले छुट्टाछुट्टै ¥याली निकालेका छन् ।
शरिर ढाकिने कपडा लगाउन, हात, गोडामा क्रिम वा तेल लगाउन सुझाए । डेंगु गराउने लामखुट्टेले बाटा, टायर, वाल्टिन, गमला, एयर कण्डीसनर, खुल्ला ट्यांकी, थोरै मात्रै पानी जमेका बिर्कोमा फुल पार्न सक्ने भएकाले सावधानि अपनाउनुपर्ने बताए । उनले डेंगु लागेपनि जोखिम समहूका बाहेक अन्य डराउनु नपर्ने बताए ।
“सामान्य ज्वरो आउँदैमा डेंगुनै हो भनेर डराउनुपर्दैन”, उनले भने, “चिकित्सकको सल्लाहमा घरमै बसेर पनि स्वास्थ्य लाभ लिन सकिन्छ ।” ज्वरो तथा दुगाई कम गर्न सिटामोल, फ्लेक्सन, बुफ्रिनको प्रयोग गर्नुभन्दा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने बताए । उच्च ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, आँखाको गेडी दुख्नु, शरिरमा डावरहरु आउनु, आदी डेंगुका लक्षणहरु हुन् ।
१. दुई लाख ४० हजार ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ
२. साकाहारीहरुले थाहा पाउनुहोस्, भरपुर प्रोटिन पाइने आहार
३. नेपाल विकास र समृद्धिको युगतर्फ गइरहेको छ : प्रचण्ड
४. सचिव घुससहित पक्राउ
५. सङ्घीयता कार्यान्वयमा कानूनी अन्योल कायमै
६. पत्रकार पराजुलीको कथासङ्ग्रह ‘कुमाता’
७. कोरोनाको त्रास : जापानमा विद्यालयहरु छुट्टी, कन्सर्ट र पार्कमा भेला हुन प्रतिबन्ध
८. श्रीलंकाले एमसीसी सम्झौता नगर्ने
९. सिरियाको इडलिबमा ३३ जना टर्केली सेना मारिए